Incwadi yeNcwadi S: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuSungulwa | Iindaba zeGajethi
Kunye neefowuni zayo ezintsha eziphezulu, Isamsung isishiye nezinye iindaba kumnyhadala wayo. Uphawu lwaseKorea lubonisa ilaptop yayo entsha kwiNcwadi yeGlass S. Le laptop iboniswa njengeyona nto ibalaseleyo esele isishiyelwe yinkampani ukuza kuthi ga ngoku, idibanisa ezona laptops zazo zibalaseleyo kunye neefowuni zazo, njengoko zibanga njalo. Yinto ethembisa yona kwaye ininzi.
Yilaptop evula uluhlu olutsha kwikhathalogu yayo yekhompyuter. Kule meko, i-Samsung igxile ikakhulu kumabala e- ukushukumiseka kunye nokunxibelelana nale Galaxy Book S. Bafuna ukusishiya nento eyahlukileyo kunale siyibonayo nezinye iilaptops kwintengiso.
Uyilo lwencwadana yokubhalela lubonakala kakhulu ibhityile, ilula kwaye inesikrini esinezakhelo ezibhityileyo. Izibophezele kubuhle bemihla yethu, obuza kubangela umdla kubathengi. Ukongeza, kwinqanaba lobugcisa, sifumana ilaptop enamandla kunye nokusebenza kakuhle.
1 Iinkcukacha zeNcwadi yeGlass S
Iinkcukacha zeNcwadi yeGlass S
Isamsung ijoyine amandla neMicrosoft kunye neQualcomm ekwenzeni le ncwadana. Iziphumo zicacile, yenye yezona laptops zibalaseleyo uphawu lweKorea olusishiye ngalo ukuza kuthi ga ngoku. Ukusebenza kakuhle, uyilo lwangoku, kunye nezinto ezintle ezilungileyo, ke iya kuba lilaptop enqwenelekayo kwintengiso. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kweGlass Book S:
Isikrini: 13,3-intshi FHD TFT (16: 9) Iscreen sokuchukumisa kunye nesisombululo se-1.920 x 1.080
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 8cx 7nm i-64-bit ye-Octa-core kwinqanaba eliphezulu le-2.84 GHz + 1.8GHz
Ukugcinwa kwangaphakathi: 256/512 GB SSD (iyandiswa ngeMicrosoftSD slot ukuya kuthi ga kwi-1 TB)
Ibhetri: Iirhafu ze-42Wh kunye nokuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-23 zokudlala ividiyo
Ukunxibelelana: INano SIM, iBluetooth 5.0, i-USB-C, iGPS, iGalileo, iGlonass, iBeiDou, iWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz), VHT80 MU-MIMO
Inkqubo yokusebenza: Windows 10 Ikhaya kunye / okanye iPro
Abanye: Isivamvo seminwe kunye neWindows Hello
Imilinganiselo: 305,2 x 203,2 x 6,2-11,8 mm
Ubunzima: 0,96 kg
Enye yezinto eziphambili zeNcwadi yeGlass S yile isebenzisa iprosesa ye-Snapdragon 8cx. Yinto chip ebaluleke kakhulu kwintengiso, ezisetyenziswa ngakumbi nangakumbi ziimpawu zelaptop. Ngombulelo kuyo, ukuhamba kunye nokunxibelelana kweselfowuni kunye namandla ekhompyuter anokufumaneka kwiLaptop. Umdibaniso owenza umdla omkhulu, ukuze ufumane okuninzi kuwo. Iza ne-8 GB ye-RAM kunye nokudityaniswa kokubini kokugcina, esinokwandisa nangaliphi na ixesha.
Iscreen selaptop kukuchukumisa, eya kusivumela ukuba sinxibelelane nayo ngeendlela ezahlukeneyo. Inkcukacha enomdla kule Galaxy Book S kukuba akukho balandeli, kuba ayitshisi njengelaptop eqhelekileyo. Ikwasishiya nokuzimela okuhle, njengoko inkampani ityhilile. Unxibelelwano lusebenza kule 4G kule meko, ke akufuneki sidityaniswe kwi-WiFi kule meko. Nangona ithatha ukuba isicwangciso sedatha siya kufuneka ukuze sikwazi ukusisebenzisa. Ine-slot ye-nano SIM, evumela ukuba isetyenziswe kule meko.
Inkqubo yokusebenza kule meko yiWindows 10, kuguqulelo lwasekhaya kunye nePro, zombini ziyafumaneka. Inkampani iyangqina Kwakhona ubukho benzwa yeminwe yeminwe, ukuze ifikeleleke usebenzisa iWindows Hello. Imilinganiselo yokhuseleko eyongezelelweyo kwiLaptop, ethintela umntu ukuba ayifumane ngaphandle kwemvume, umzekelo.
Incwadi yeGlasi S iya kuqhubeka nokuthengisa oku kuwa, njengoko i-Samsung sele iqinisekisile ngokusemthethweni. Nangona izakwenza njalo kwiimarike ezikhethiweyo, ukuze okwangoku singazi ukuba inkampani yaseKorea izakuyivula eSpain. Kuya kufuneka silinde iiveki ezimbalwa ukuze sibe nedatha ethe kratya malunga noku.
Kukhutshwa ngemibala emibini: ngwevu negolide. E-United States, amaxabiso okuqala afanayo zii-999 zeedola, Njengoko sele iqinisekisiwe ngumqondiso waseKorea. Kodwa asazi ukuba liya kuba yintoni ixabiso lalo ekumiselweni kwayo eYurophu. Ke sinethemba lokufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » I-Samsung Galaxy Book S: Ilaptop entsha yohlobo
I-Galaxy Watch Active2 Ngaphantsi koHlelo lweZikrweqe: uHlelo olutsha lokuBukela